Shirka kooxda xiriirka Somalia ee ururka Iskaashiga Islaamka oo lagu wado inuu furmo maanta… – Hagaag.com
Shirka kooxda xiriirka Somalia ee ururka Iskaashiga Islaamka oo lagu wado inuu furmo maanta…
Posted on 27 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Shirka Kooxda Xiriirka Soomaaliya ee OIC ayaa horay loogu dhinac qaban jiray Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey, waxaana shirkan maanta ka furmaya Muqdisho la filayaa inuu noqdo mid heer Wasiir ah.
Wafdi horudhac u ah xubnaha ka qeyb galaya shirkan oo u badan Guddiyada joogtada OIC ee fadhigoodu yahay magaalada Jeddah ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, sidoo kale waxaa la filayaa in maanta ay soo gaareen qeybta kale ee wafuuda shirka ka qeyb galeysa.
Wasiiro ka tirsan dalalka ku bahoobay Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa la filayaa inay shirkan ka soo qeyb galaan.
Shirkan ayaa ka dhici doona hoolka weyn ee ku yaala Afisyooni ee xeyndaabka Garoonka diyaaradaha Muqdisho, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay, waxaa shirka ka qeyb galaya Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya.
Kooxda Xiriirka Soomaaliya ee OIC ayaa 10-kii sano ee ay jireen isugu yimaadeen shirar dhowr ah oo lagu taageerayay dowladda Soomaaliya.